Uyini umehluko phakathi kwe-SRAM ne-SRAM Eagle? - Ukuzivocavoca Umzimba
Main > Ukuzivocavoca Umzimba > I-Sram eagle cassette weight - sesha izixazululo
I-Sram eagle cassette weight - sesha izixazululo
Uyini umehluko phakathi kwe-SRAM ne-SRAM Eagle?
ezimbili.Ama-SRAM'si-FLOWLINK Chain entsha ayisona isixhumanisi esibuthakathaka. I-umehluko phakathi kwe-SRAM Eaglenezindandatho ezingama-50 zokunyusa izinyo ukuthi kungukuhlelwa kabusha 'komhlaba'. Ijubane eli-12Ukhoziiketanga lisha sha, linamapuleti angaphakathi ayindilinga nezikhonkwane ezifuthisa ngokuphelele ezithulisa idrayivu.UMashi 24 2016
Sanibonani bafowethu! Uma usebenzisa ibhayisikili lakho ngokwanele, kunengozi yokuthi ezinye izingxenye zizohluleka. Lesi yisisiheli se-Eagle GX esisabukeka sihle. Nginegatsha kuma-spokes ami, angazi noma uyabona yini ukuthi leli lishaywe kahle ngesikhathi somjaho wami wokugcina, futhi ngenxa yalokho, i-derailleur yami engemuva isontekile okwamanje ngakho-ke ayisasebenzi kahle.
Angisakwazi ukuyiqondisa. Njengomunye ozongena esikhundleni ngizosebenzisa iX01, okuyisiduli sangemuva esishibhile soKhozi esivela kwaSRAMand Kule ndatshana emfushane ngizobheka izinhlangothi zombili ngapha nangapha bese ngibona umehluko phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili. Uma ubuka i-athikili yami yokufaka uzokwazi ukuthi kukhona ukudlala okuncane kulelo knuckle lapho i-derailleur inamathela ku-hanger, futhi lokho kusho ukuthi kudlalwa kancane lapha ezansi kwekheji.
Lokho akubonakali kuthinta ukusebenza noma ukushintsha kokusebenza kwe-powertrain, kepha ngiyafisa ukwazi ukuthi ngabe inkinga efanayo iyenzeka yini ku-X01. Ngisebenzise le drayivu nge-X01 shifter, kepha i-G X-Shifter ayihlukile kakhulu, empeleni ngine-athikili eqhathanisa izinhlangothi zombili.
Kubukwa buqamama, ungahle ulingeke ukuthi uthi zakhiwe ngokufana futhi ubungeke ube kude uma ukusho lokho, ikakhulukazi uma ubheka indawo lapho kutholakala khona i-clutch. Ukuhlanganiswa kwale ngxenye yezinyoni kubonakala kufana emayunithi amabili, bheka emuva lapha kwakhiwe okufanayo, kubukeka kufana. Ukusuka ngaphambili unemidwebo ehlukile kuleyo ngxenye yezinyoni, kepha lokho kumayelana nakho.
Ingxenye yangaphakathi yezinyoni ibukeka icishe ifane. Ungabona ukuqeda kuhlukile, umcabango omncane ku-X01 kune-GX. Ngendlela, nayi inombolo ye-serial egxivizwe kubo bobabili futhi bayehluka ekwakhiweni.
Uma ubheka ithebhu lapha, uzobona ukuthi i-GX inesimo esigobile, isb die-cast aluminium.
Futhi lokhu kubizwa ngomgunyathi, lokhu kufakwa ngendlela, bheka isimo sayo sigobile. I-XX1 ibizoba nale ngxenye yangaphakathi eyenziwe ngekhabhoni ngendlela. Ijokhi ephezulu lapha noma i-pulley yomhlahlandlela.
Kubonakala kufana nalaba bobabili abasusa izindawo. I-SRAM isebenzisa ama-ball bearings, kuzo zombili i-GX, i-X01 ne-XX1 futhi zibukeka zihlala isikhathi eside impela. Nginendatshana endala ekhombisa ukuthi ungasilungisa kanjani kancane lapho.
Ngendlela, lokhu akuyona iphrofayili encane, ebanzi, le jockey ephezulu. Uma ubheka isondo eliphansi le-jockey noma i-tensioner pulley, noma bethi liyafana, alibukeki lifana nami; iX01 inephrofayili efana kakhulu neyabasebenzisi bakaShimano kuma-XT speed abo ayi-11 nama-XTR iyafana. Le yiphrofayili ebanzi, kepha futhi unaleli ring elizungezile.
Ngicabanga ukuthi kungenxa yokuthi ayicindezeli udaka kumabhere lapho ugibele ezimweni ezimbi kakhulu. Futhi uma ngiqhathanisa noShimano, ngiyayithanda indlela le ngxenye yezinyoni efakwe ngayo umgogodla futhi ngicabanga ukuthi lokho kungamane kususe udaka oluningi uma uluqoqa lapha kule jockey ephansi ye-GX ibukeka njengelula, eshibhile ukukhiqiza iDizayini, nawe bona lapha kubuye kube nemali encane, ebanzi, kodwa futhi ephansi futhi kukhombisa lokho. Iphrofayili yamazinyo ayiqondakali futhi esikhathini esedlule bebemakwa kwesobunxele nangakwesokudla kule jockey.
Angikuboni lokhu ku-X01 ngakho-ke uma uhlukanisa lokhu khumbula ukuthi le reel yekhebula kuX01 ingasuswa kanjani ekuhlanzeni noma ekuthambiseni. Uyabona ibhawodi laphaya. Kukhona abathengisi bezinkampani zangaphandle laphaya futhi, bakholwe noma cha, yenza enye yalezi zinhle.
Awukwazi ngempela ukukwenza lokho ku-GX, lokhu kubhalwe phansi ukuze ungakwazi ukukukhipha. Okuwukuphela komunye umehluko phakathi kwalokhu okubili kungaba isisindo, amagremu angama-292 we-GX, ama-281 nge-X01, ngakho-ke amagremu ayi-11 kanye namaRandi ayi-100. Ngakho-ke ake ngifake i-X01 ebhayisikilini ngibone ukuthi ngiyawubona yini umehluko ekusebenzeni.
Sebenzisa ukhiye ongu-5 mm Allen no-10-12 Nm ukunamathisela i-derailleur ku-hanger ye-derailleur yakho. Qiniseka ukuthi kunjalo, ukuthi isiphanyeko sakho se-Eagle derailleur sihle futhi siqondile. Futhi, ukulungiswa kwe-B-gap abakunakekelayo yile template encane okungenzeka ukuthi iyona nto ebaluleke kakhulu lapho kulungiswa i-Eagle drivetrain.
Kepha sebenzisa i-athikili yami yokufaka ukuzivumelanisa nokwenza lokho. Umdlalo ohlangothini lapha awusekho, kunokunyakaza okuncane, kepha lokho kunikezwa ukubekezelelana ngobude bengalo kule ndawo enwetshiwe, uma kungenjalo. Ukushintshwa esitendini sebhayisikili njengoba kulindelekile, okuyinto enhle impela.
Engingazange ngikuqaphele ukuthi uchungechunge oluku-42T no-50T alusavumelani namazinyo amancane abanzi. Ngakho-ke lokho kuyathakazelisa ngicabanga. Enye, ngqo esitendini, igebe lami le-B akuyona okufanele libe yilo.
Ingabe empeleni incanyana ngoba bancoma ukusetha lokho nge-20% Sagso ebhayisikili, yindlela yokusetha i-B-gap. Ngakho-ke ake ngikubeke ezindleleni bese ngibheka ukuthi ngiyawubona umehluko lapho. Ngithathe ibhayisikili emizileni yendawo, le drivetrain iyikho konke ebenginakho ngaphambili ngaphandle kwesivinini somgwaqo Ngabe ngiwuzwa umehluko kunesiphululi se-GX ebenginaso ngaphambili? Ngingasho impela ukuthi yebo, indlela engikubone ngayo esitendini, isekethe liyacwebezela, kunzima nje ukukuchaza.
I-snappier isiyonke, isebenze kahle ngaphansi kwamandla, bekulungile. Kepha ngithole kuphela lokho ngokuhlola ubuyela emuva uma ufuna. Uma ujwayele i-Eagle GX kuphela, bengikulungele ngokuphelele ukufaka esikhundleni eshibhile nakanjani ngaphambili.
Ingabe kufanelekile ukucubungula i-GX drivetrain ne-X01 derailleur yangemuva? Izinkampani ezinjengeYeti zingacabanga ukuthi le yindlela ukwakhiwa kwayo kwe-GX kanye ne-X01 Buildshave GX yazo enakho konke okuhle ngaphandle kwe-derailleur engemuva, eyi-X01, futhi ngokuya ngezivivinyo zami namuhla, ngicabanga ukuthi ngiyazi ukuthi kungani kukuhlanza ishintsha ukunikezwa okuphelele. Futhi yilokho kuphela enginakho imibuzo yakho namhlanje ake ungazise ngezansi, ngizobeka izixhumanisi eziningi encazelweni ukuze uthole eminye imininingwane. Uma ukuthole lokhu kuwusizo, ungakhohlwa ukuthanda i-athikili bese ubhalisela isiteshi sami futhi kuze kube yisikhathi esizayo nginethemba lokunibona bafana emizileni, bajabule bafana, nijabule!
Uyini umehluko phakathi kwekhasethi ye-NX ne-GX?
Ikhasethi. Eyodwayeenkulu kakhuluumehluko phakathiiI-NX ne-GXimigqa ikhonakumakhasethi. I-Ikhasethi le-NXifaka amagiya axegayo anezikhala zeplastikiphakathizona futhi zingena emzimbeni wakho ojwayelekile we-freehub onama-splines. I-Amakhasethi we-GXukuthuthukela kuma-cogs aphiniwe, ngakho-keikhasethikuyinto eyodwa.
Ungaxuba futhi uqondanise izingxenye ze-SRAM Eagle?
Kubagibeli abayitoho noma labo abahlukumeza amabhayisikili abo, kungahle kungazuzisi ukusebenzisa okuningiXX1. Ngebhayisikili lami lamanje,Mina'futhiizingxenye ezihlanganisiwe nezimataniswayoukwenza i-drivetrain elungele izidingo zami. Konke kweUkhozi luka SRAMamaqembu empeleni asebenzisana, ngakho-ke umawenaNginezintandokazi ezithile,ungaxuba uphinde uqondanise.UMashi 24 2020
We bafowethu! Njengoba kuthenjisiwe, into yokugcina engifuna ukuyenza lapha ukuhlola i-XTR shifter kanye no-gearbox we-XTR 12-speed, konke okunekhasethi le-SRAM Eagle. Lokho kungenxa yokuthi angihleleli ukuthenga noma iyiphi iMicro Spline noma amakhasethi amasha kaShimano, okwamanje, yize nginezindawo ze-DT Swiss futhi ngikwazi ukuyitholela i-Micro Spline freehub yayo. Kulabo kini ababone i-athikili yami, le hybrid, XTR 12-speed transmission nge-GX derailleur.
Abanye benu bathe isekethe belincane futhi linomsindo. Ngingasho ukuthi lokhu kusebenze kahle kakhulu, kepha nalu olunye uvivinyo olusheshayo ukuze ukwazi ukukusekela. Ngakho-ke ngine-Shimano shifter, uchungechunge lwe-SRAM Eagle GX, ikhasethi kanye ne-derailleur yangemuva.
Nazo-ke. Ngamunye kuqala. Yonke indlela eya phezulu.
Yile ndlela enginayo manje. Lokho akukubi nakancane, nakanjani bengizogibela le nhlanganisela nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Ngakho-ke ake sithathe indawo ye-GX derailleur ngeXTR.I.
Ngizosebenzisa kabusha ikhebula neketanga. Yebo, ngifisa sengathi i-XTR ibingakhiya ikheji, njengoba kwenza abahlaseli be-SRAM. Okokuqala isikulufa esikhuphukayo sisebenzisa ukhiye ongu-5mm Allen, ngibeka iLoctite phezu kwaso, futhi uma usiqinisa lapha, kwisiphanyeko sedreyini, qiniseka ukuthi lapha alikho igebe ngale B-Gap Stop - Ngicabanga ukuthi uyashayela ukuthi. I-8 to 10 Nm torque kulesi sikulufu Ukulungisa izikulufo zomkhawulo, sebenzisa ukhiye ongu-2 mm Allen futhi, njenge-SRAM Eagle, qondanisa isondo elingaphezulu le-jockey ngaphandle kwegiya lokuqala lekhasethi.
Qiniseka ukuthi usegiyeni eliphezulu lapha ku-lever yegiya, bese usebenzisa ukhiye we-4mm Allen ukuhambisa ikhebula langaphakathi liye lapha. Ikhebula langaphakathi lisonga kakhulu isikulufu. Futhi nakhu.
Yebo, anginankinga nentambo yami yangaphakathi enoboya, ngizoyifaka esikhundleni sayo ngaphambi kokuthi ngihambe. Ubude beketanga banconywe nguShimano, cishe obufana nalokho okunconywe yi-SRAM, kepha mhlawumbe kulula ukukala. Ngakho-ke bacela okukhulu kokukhulu enginakho lapha kuhlanganisa okukodwa, okubili, okuthathu, okune, nginezixhumanisi ezinhlanu, batusa u-4 noma u-5 kanye nesixhumanisi esisheshayo ngakho-ke ngiphakathi kwama-specs abo ebhayisikili le-hardtai.
Vele wazi ukuthi icala lapha lama-XTR nakanjani lithatha isikhathi eside kunaleli elenzelwa uKhozi futhi ngalesi sikulufu esilinganiswe kahle esilinganiselwe, sekuyisikhathi sokubheka igebe le-B. Futhi kulula ukuthi ulungise le-B-gap, unikezwe uphawu uShimano alufakile kwisici sabo sangemuva. Siyabonga uShimano! Hlakaniphile! Futhi kulabo abafuna ukwazi ukuthi kugcine ngami, ngokwe-SRAM lokho kungaba yi-16-17 mm, ngokusho kukaShimano lokhu kukalwa kuye nge-ekseli, futhi lokho kungaba ngamamilimitha angama-45.
Ngakho-ke lapho ukufakwa sekuphelile, ngine-XTR shift levers nama-derailleurs, i-12-speed Shimano drivetrain. Kuyasebenza? Angazi, ake sizame! Izifundo eziningana ngasikhathi sinye nezimbili ngasikhathi sinye. Kulungile ngakho ucabanga ukuthi Kusebenza kahle, kusebenza kahle.
Kungcono kunalokho engikubonise kona ekuqaleni kosuku lapho ngine-drivetrain yokhozi lwe-SRAM? Ngabe ngiqamba amanga kuwe uma ngithi ngibonile umehluko omkhulu, mhlawumbe, mhlawumbe isenzo esincane sesitshudeni sokushintsha, futhi lokho kungenxa yemithombo nokungezwani kule clutch. Zombili zingisebenzela kahle futhi bengingazisebenzisa noma nini. Futhi kunombuzo owodwa futhi engizozama ukuwuphendula futhi, owokuthi, i-derailleur iya kude kangakanani? Ngizolinganisa kusuka kwisiphanyeko sangempela se-derailleur, futhi le XTR icishe ibe ngu-28mm noma ingaphansi nje kuka-3cm., Ngokuphambene nalokho, le SRAM Eagle X01 icishe ibe ngu-4cm, ngakho-ke ngikhuluma okungenani nge-intshi engaphezu kwale-Ukhozi lwe-SRAME kuphuma kuhlaka.
Ngiyethemba ukuthole lokhu kuwusizo. Uma kunjalo, ungakhohlwa ukuthanda nokubhalisa. Ingabe kukhona noma yisiphi isiphetho noma ezinye iziphetho? Ngikhetha muphi phakathi kwe-XTR 12-speed ne-Eagle 12-speed? Ukukhuluma iqiniso kuwe ngingahle ngijwayele noma yini, bengisebenzisa uShimano kakhulu, ngisebenzisa uKhozi kusukela ngonyaka odlule noma kunjalo.
Bobabili basebenza ngokuphelele futhi banikeza ukukhetha okuningi kokushayela engikwenzayo. Futhi uShimano okungenani muhle, mhlawumbe ungcono uma uthanda ukuzizwa kwalolo shintsho olusha, kepha uma kungenjalo kulungile. Inzuzo enkulu kimi ukuthi ziyashintshana.
Izingxenye zikhona futhi lokho kungakuvumela ukuthi ube nezingxenye ezimbalwa zokuphumula endlini uma kufanele usebenze ngaphezu kwesitimela sokushayela esisodwa. Futhi yilokho, bafana! Uma unemibuzo ngicela ungazise esigabeni esingezansi. Ungakhohlwa ukuthi ngisenezindatshana ezimbalwa ezikhuluma ngejubane le-XTR 12, impela ezinye zikhuluma ngoKhozi lwe-SRAM, futhi ngize ngibe nesikhathi esizayo nginethemba lokunibona nina bantu nisemikhondweni.
Jabulani bafana, jabulani!
Yini engcono i-SRAM NX noma i-SX?
I-NXingashintsha kancane ngokushelelayo ngoba inesondo le-pulley ku-derailleur yangemuva. I-SXyiqembu eliyisisekelo eliyi-1x ongathola kuloIhlazo. Uma ungathola ifayela le-kangconosebenza ku-11spNX.23 jana. Februwari 2020
Kuhle? Ingabe kufanele uthuthukise okuthile? Nakhu ukuthatha kwami ​​okufanele ukukugcina noma ukulahlekelwa yileli qembu. I-Eagle SX iyiqembu elinejubane lokungena le-12 elivela kwa-SRAM.
Futhi yebo, kuyingxenye yobuchwepheshe obukhulu bokhozi. Ungabona amaketanga, empeleni angashintshaniswa nazo zonke ezinye izinto zoKhozi, noma ngabe lezi zenziwe ngensimbi. Baningi abantu abakhetha la macici wensimbi ngoba ahlala isikhathi eside kakhulu, ngakho-ke amaketanga afakiwe nakanjani kuhle ukuhamba nawo.
Kunezinguqulo ezi-2 zezikhonkwane ze-Eagle SX, futhi uma i-DUB yakho isho khona lapha phakathi, unenhlanhla. Lokhu empeleni kuyi-crank ehloniphekile, inzima impela, kepha isebenzisa ubakaki ongezansi we-SRAM DUB. Lokhu empeleni kuhle kakhulu futhi ama-cranks akho aset izingcezu ezimbili, izintambo eziqondile zezintaba zikuvumela ukuthi ufake zonke izinhlobo zamaketanga, ngakho-ke noma ngabe ufuna ama-ovals we-fancier kanjena noma lokhu noma ukhetha izintambo ezincanyana ze-SRAM, zonke zizolingana eyakho Cra nkset nje kahle.
Ngakho-ke futhi i-cranket enezicucu ezimbili ze-DUB, ingumgcini. Nginayo i-athikili ekhuluma kabanzi ngayo, inguqulo eshibhile esisebenzisa ibakaki elingezansi lamandla, iyisiqeshana esinezicucu ezi-3 sisasebenzisa intambo eqondile efana nale, ngakho-ke zilungile ngokubuka okusebenzayo . Kodwa-ke, uma ufuna ukonga isisindo esithile futhi ufuna ubakaki ongezansi ongcono, udinga ukufaka esikhundleni saleso sigaxa samandla amathathu sePower Spline esingiletha kuketanga futhi kufanele ngivume ukuthi ngibe nokuhlangenwe nakho okuxubene namaketanga ama-Eagle ashibhile.
Isebenzisa isixhumanisi sokushayela esimise okwezinso noma isixhumanisi esisheshayo, lawa ngamaketanga angamajubane ayi-12 ahambisana nohlelo lwe-Eagle.Nqobo nje uma unake ukugqokwa kwamaketanga futhi uqiniseke ukuthi uyakushintsha ngaphambi kuka-0.5 angisiboni isizathu sokuthi kungani kufanele uthinte iketanga le-OEM elize nebhayisikili lakho.
Ngokuya ngesipiliyoni sami ngamaketanga ashibhile, nakanjani ngingahle ngincoma ukugcina uketshezi lokuphepha lusebenza. Kwabade angikaze ngisebenzise amaketanga e-GX anama-Eagle drivetrains, kepha muva nje ngifunde i-athikili emayelana nokuhlolwa kwamaketanga futhi amaketanga i-X01 ne-XX1 kube ngamaketanga ahlala isikhathi eside kakhulu esivivinyweni sabo, afaka uchungechunge lwakho olushibhile kangcono kunanoma iyiphi enye eyi-12 iketanga elisheshayo laphaya. Iketanga le-X01 lingahlala isikhathi esiphindwe kabili kuma-2-3 kunento enjengale.
Futhi lokho kusiletha ku-cartridge yokuqala eyethulwe yi-Eagle NX. Kuyinto izinyo elingu-11 kuye kwangama-50 ebangeni lamagiya angama-450%, kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi ikhasethi lisebenzisa lokhu: umgwaqo onguthelawayeka onamazinyo amadala, uShimano omdala ebesikade siwusebenzisa iminyaka, empeleni usuka kumagiya ayi-8. Lokhu kusivumele ukuthi sifake i-12-speed drivetrain kozimele abadala abangaqinisiwe, ozimele be-135mm QR futhi kwavumela ne-SRAM ukwethula ama-drivetrains asheshayo ayi-12 kubantu.
Ukhozi belunoguquko ngoba lusinike isilinganiso segiya esingu-500%, okuyisona esingu-520% namuhla. Le cartridge isinika cishe ama-450% kuphela kanti le-cartridge nayo isinda kakhulu kunalena ebiza kakhulu, sikhuluma nge-cartridge engu-600g uma iqhathaniswa ne-450g ye-GX. Kodwa-ke, ukuze uthuthukise le khasethi udinga ukuqiniseka ukuthi umshayeli we-XD uyatholakala kwihabhu yakho yangemuva.
Uma ingatholakali, okuwukuphela kwithuba lakho lokuyibuyisela esikhundleni sokufaka lonke isondo noma ihabhu ngento ethile oyinikwa ngumshayeli we-XD. Ibiza kakhulu futhi ngaphandle kokuthi ufuna ukonga isisindo noma uhambele uhla, i-SX / NX cartridge empeleni ihloniphekile njengoba injalo. Uma ukhetha lo mzimba we-freehub, uma sekuyisikhathi sokushintsha ikhasethi lakho nganoma yisiphi isizathu noma ufuna uhla olungcono kancane, ngakho-ke kuhlole! Futhi lokho kusiletha kwisiphepheli.
Futhi yebo, i-derailleur ye-SX isisixhumanisi esibuthakathaka kakhulu. Uyabona eyami isivele ine-NX ngoba ngombono wami i-Eagle SX ayenzelwanga ukusetshenziswa emgwaqeni. Kuyathakazelisa, mina Uma uvakashela iwebhusayithi ye-SRAM namuhla uzothola umchilo wesithutha osanda kushiwo, kodwa futhi nalokhu okusha.
Le nguqulo ye-B1 yokunikela kwabo eshibhile, ingemuva layo lenzelwe kabusha lapha ukufana nokwakheka kwe-NX, GX kanye naleyo ebiza kakhulu. Uma ukhuluma nomthengisi wamabhayisikili, bazokutshela ukuthi ama-derailleurs angaphambili e-SX aphakathi kwezinto ezivamise ukufaka indawo yazo. Ngijabule kakhulu ukubona ukuthi le derailleur entsha ye-SX izohamba kanjani ngo-2021.
Kepha ubuhle boKhozi ukuthi zonke izinto ziyashintshana, konke. Ngakho-ke uma lowo mdlali we-SX efa, ungayifaka esikhundleni se-GX futhi abantu abaningi bayakwenza. Abanye bangakutshela ukuthi konke okungaphansi kwe-X01 akunamsoco, ngakho-ke, hamba uye ku-X01 derailleur uma ufuna, kepha lokhu kucace ukuthi kubiza kakhulu kune-NX noma i-GX engemuva lesisili.
Futhi ekuhlolweni kwami ​​okuningi ngiyakutshela ukuthi ungayishintsha le-derailleur yangemuva ye-SRAM Eagle nge-Shimano 12-speed ezingemuva futhi ngeke ube nezinkinga. Empeleni i-Shimano 12-speed derailleur kubonakala sengathi yenziwe kangcono. Ukushintshwa kwejubane kwe-Eagle SX noma i-NX yakho nge-DEORE kungaba wumoya kwabanye.
I-derailleur engcono ikunikeza amashifu abukhali ngaphandle kokungabaza, kepha iqiniso ukuthi lisebenza ngokubambisana neshifter. Futhi i-SX shifter impela eshibhe kakhulu ohlwini lwabo. Itholakala kuphela kuleli fomu njengesigaxa sesibambo futhi inezindwangu zepulasitiki.
Isebenza kahle kepha ithambile lapho uyithinta futhi ungazizwa lezi zigwedlo zigoba noma zihamba ngezikhathi ezithile uma kuqhathaniswa nento efana ne-GX ebonakala inotshi ephezulu uma iqhathaniswa. Futhi, lokhu kungakhiwa ngamabhuleki e-SRAM, angenakwenzeka nge-SX, kepha ngenkathi kungazizwa ukuthi ikhwalithi ephezulu uma iqhathaniswa namashintshi abiza kakhulu, le yingxenye ebengeke ngiyibeke esikhundleni sayo ukuqala nge, kusebenza kahle. Kepha uma ikhwalithi yakho yokushintsha yehla ngokuhamba kwesikhathi, angisoze ngasola i-shifter, kepha bengizobheka ikhebula lakho le-shift ngokucophelela ukuthi uyihhanisi likaShiman o Optislick.
Ngingahlala ngincoma lokhu futhi ngiqiniseke ukuthi isebenza kahle, ukuthi ikhebuli alikhiphi noma yini efana naleyo. Lokhu kuthinta ukusebenza okuphelele kwesigwedlo sokushintsha. Lokhu kubalulekile futhi ngejubane eli-12, isiphanyeko se-derailleur, qiniseka ukuthi iqondile futhi ifakwe kahle kungenjalo uzoba nezinkinga ngekhasethi lakho, ukushintsha kwezinye izingxenye zekhasethi, noma zonke izinhlobo zokuziphatha okuxakile.
Zizoba nzima kakhulu ukuthola ukuthi ngabe uyayenza yini indatshana yami nge-Eagle SX? Hhayi, angihambisani neze ne-SRAM Eagle SX njengeqoqo elihle leqembu. Ngokuphambene nalokho, uma unemali futhi uqala phansi kungenzeka kube nezinye izinketho, inhlanganisela ye-DEORE ne-SunRace kungenzeka ibengcono. Kepha uma une-SX ngoba ifike nebhayisikili lakho, ngiyethemba ngikunikeze imibono ngezinto ongazithuthukisa kusukela ekuqaleni noma izinto ongazenza ukuyigcina ibambelele okungenani isikhashana.
iqhwa manje lishisa kamuva
Ucabangani ngoKhozi SX, ususebenzise lona isikhathi eside, ngabe kukhona okunye osukuvusile ngaphandle kwalokhu engikushilo lapha? Ngazise imicabango yakho kumazwana angezansi. Futhi uma ukuthole lokhu kuwusizo ungakhohlwa ukukuthanda, bhalisa, unake imithombo yezokuxhumana futhi unethemba lokukubona emizileni ngesikhathi esizayo. Jabulani bafana, jabulani!
Ngabe i-SRAM ingcono kuneShimano?
UShimanofuthiIhlazobobabili benza imikhiqizo esezingeni eliphakeme, kepha indlela abasebenza ngayo nezitayela zabo yehlukile. Uma ubheka ukwakheka kwengxenye yamanje, kungashiwo ukuthiUShimanoimvamisa yiyona egcina imikhuba emibili. Eminyakeni eyishumi edlule,Ihlazouye walandela drivetrain emisha ngolaka.Septhemba 6 2019
Ngabe amakhasethi e-SRAM Eagle ayashintshana?
Njengakuqala, wonke amazinga weUkhozi, ngokuhlukile okuthile kwamaqembu e-SX ne-NX, angama-kuyashintsha. Ngakho-ke, ungaya ngokukhanya kwe-XO1 /Amakhasethi we-XX1ngenkathi usebenzisa izingxenye ezingabizi kakhulu zokushintsha kwe-GX. Ukukhuluma nge-GXUkhozi, baliklame kabusha ngokuphelele lelo qembu.Juni 11 Februwari 2020
Ungakwazi yini ukuhlanganisa nokufanisa i-SRAM?
Ama-SRAM'samakhasethi namaketanga ahambelana nawo wonke amaqoqo kaShimano, futhi okuphambene nalokho. Ngokufanayo, uShimano noIhlazoabathengi banenkululeko yokuhlanganisaamazinga ahlukene amaketanga namakhasethi uma nje enzelwe uhlobo olufanayo lokudlulisela.Disemba 28 2017
I-Amakhasethi we-SRAMzilula ngenxa yokushoda kwezicabucabu ezixhuma izingodo ezahlukahlukene, kanye nomshayeli omncane. Kungakho kunjalokubiza kakhulu futhi. futhi okungenani izinto zokuphela eziphakeme kakhulu (njengokhozi, mhlawumbe ezinye zezinto eziyi-11spd) zenziwe ngocezu olulodwa, futhi akuyona into yomhlangano.UMar 13 2017
Ngabe i-SRAM ngekaShimano?
IhlazoInhlangano iyimfihloibanjiweumakhi wezinto zebhayisikili ezinze eChicago, e-USA.Ihlazoyisifinyezo esiqukethe amagama abasunguli baso, uScott, uRay, noSam.UShimano, Inc.ingumkhiqizi wezizwe ngezizwe waseJapan wezinto zokuhamba ngebhayisikili, ukubhekana nokudoba, nemishini yokugwedla.
Kusho ukuthini uKhozi nge-SRAM?
Ukuze ukhame igiya elengeziwe kunani elifanayo legumbi (Ukhoziizolingana kunoma yimuphi umzimba womshayeli we-XD), ama-cogs ahlukaniswe ngokusondelana--incazeloukuthi empeleni iyikhasethi elisha ngokuphelele. Isikhala esizinikele se-12-speed futhikushoukuthiUkhozikuyintoUkhozi.UMashi 24 2016
Ngabe ukhozi lwe-SRAM lunokubamba?
I-pulley ephansi enamazinyo ayi-14 i-X-SYNC isiza kalula ikhasethi yamazinyo angu-11- kuye kwangama-50- nangu-10- kuya kwangu-50, futhi ibuye ingeze ku-NXUkhoziukuzizwa okubushelelezi ngokuphelele. Uhlobo lwe-3 ROLLER BEARINGBHEKAihlinzeka ngokuthula, ukusebenza okungaguquguquki nokuqina.
Ingakanani isisindo se-SRAM xg-1275 cassette?
Into yesibili engiyiqaphelile ukuthi into yayixakile kanjani. Njengoba ingena ngama-gram angama-449, impela akusona isisindo esincane (ikhasethi le-XT 46T lingama-425 amagremu). Isisindo esingeziwe sibonga kulokho okubukeka njengenani elingapheli lokweba okuyisisekelo, okunamathisela i-cog ngayinye kokunye.
Ngabe i-SRAM Eagle Ax inesisindo esingakanani?
Ikhasethi loqobo le-XX1 10-50 linesisindo esingu-363g, kanti ikhasethi elisha le-XX1 10-52 linesisindo esingu-373g. Ngakho-ke, ngenani elingu-10g kuphela ngenqola enkulu. Bheka izisindo zangempela zayo yonke ingxenye yeqembu le-Eagle AXS ne-Eagle XX1 / XO1.
Yiliphi iqembu eliphansi kakhulu lamakhasethi we-SRAM?
Iqoqo leqembu le-SX Eagle lihlala ebangeni eliphansi kakhulu lomugqa we-SRAM we-12-speed Eagle drivetrain lineup, kepha zonke izinto zabelana ngohlaka olufanayo, ngokusobala ku-50T sprocket enkulu yekhasethi.